Ku xidho Dunida Virtual leh ArcGIS 9.3 - Geofumadas
Ku xir dhulka Dunida leh ArcGIS 9.3
Luulyo, 2008 ArcGIS-ESRI, dalwaddii Earth
Haddii Microsoft doonayso inay si dhab ah uga ogaato dunida cilmiga dhulka iyo inay dhulka ka hesho Google, waa inay iskaashi la yeelato shirkadaha softiweerka ee takhasuska leh oo ay ka dhigto "mid xirfad leh". Tani waa waxa ku dhacay kiiskiisa furitaanka of TrueSpace si loo jaajuusiyo Sketchup!, oo hadda heshiis la leh ESRI, waxay raadineysaa in ay gaarsiiso dadka isticmaala shirkad madax banaan suuqa suuqa.
Laga soo bilaabo ArcMap iyo Arc Explorer. Waa suurtagal in lagu xiro sawirrada Virtual Earth ee hadda ku jiri doona buugga adeegga internetka. Waa suurtagal in la sameeyo labadaba sawirka iyo Khariidadaha Waddada iyo adeegga isku dhafan. Ilaa hada kan kaliya ee sidan sameeyay ... oo bilaash ayay ahayd kala cayncayn ah.
Dabcan, waa suurtagal oo keliya in lagu sameeyo qaabka 9.3 oo kaliya oo ku saabsan ArcGIS Desktop iyo ArcExplorer, in kasta oo sida muuqata aad wax ka qaban karto si aad u daabacdo laakiin waa inaad la xiriir oo leh kamarad Livemaps; Haddii aad xusuusato Arc2Earth wuxuu sameeyaa burcad-badeedkiisa ku saabsan.
Laga soo bilaabo API
Sidoo kale waa la abuuray xakameyn ASP.NET ee u oggolaanaya inay ku daraan adeega Virtual Earth iyada oo loo marayo codsiyada la sameeyey Visual Studio 2008 iyo Visual Developer Web 2008.
Waxba waa bilaash
Dabcan, maahan bilaash, kharashku waa $ 200 sanadkiiba qofkiiba oo qiil looga heli karo hay'ad ka faa'iideysata. Qiimahaani waa kaliya in "wax lagu arko" qalabka desktop-ka, si loogu isticmaalo adeegyada IMS waa inuu noqdaa qiimo kale. Inkasta oo inbadan ay dhaleeceyn karaan in Virtual Earth aysan jirin muuqaal xallinta sare oo badan oo ah magaalooyinka "non-gringo", casriyeyntii ugu dambeysay Waxay muujinaysaa in Microsoft uu yahay mid aad u culus.
Tallaabada xigta waa hubaal in si la mid ah loogu sameeyo AutoDesk, taas oo inbadan oo naga mid ah ay ku farxi laheyd isla markaana Google looga tagi doono rabitaanka ah in ay iskaa u madax bannaanaato barnaamijyada furitaanka.
Haddii aan Microsoft ahaan lahaa, bilaash baan siin lahaa bilo, marka runti waxay qabataa dad balwad leh, waxaa laga yaabaa in tallaabo tan oo kale ah loo hayo shirweynaha inagu soo fool leh… maxaa yeelay ku dhawaaqis sidan oo kale ah ka hor dhacdada ayaa ina seegaysa.
Post Previous" Hore Bentley iyo tikniyoolajiyadeeda "soo ifbaxa" ee sawirrada radar
Post Next Wareysi lala yeesho Jack DangermondNext »
Hal Jawaab "Ku Xidhnow Dhul Virtual leh ArcGIS 9.3"
ficunfv isagu wuxuu leeyahay:
Hi, Waan jeclaaday baloogagaaga waxaanan rajaynayaa inaan wadaagno xiriirada
http://www.ficunfv.com Sida ugu dhakhsaha badan ee aad ila xiriirto ii soo dirto fariin aan isla markiiba kugu xiriirin doono buuggayaga sidaas darteed waxaan ka faa'iideysan doonnaa labadiinaba taxaddar ayaan kuula soo xiriiri doonnaa